Go’aanka ugu wanaagsan ee ay Somalia ka qaadan karto khilaafka Ruushka & Ukraine (3 qodob oo muhim ah) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Go’aanka ugu wanaagsan ee ay Somalia ka qaadan karto khilaafka Ruushka &...
Go’aanka ugu wanaagsan ee ay Somalia ka qaadan karto khilaafka Ruushka & Ukraine (3 qodob oo muhim ah)
(Muqdisho) 28 Feb 2022 – Danjiraha Midowga Yurub ee Somalia, Tiina Intelmann, ayaa kulan ay shalay la yeelatay Madaxa Xukuumadda xil-gaarsiinta ah ee DF Somalia, Max’ed Xuseen Rooble, waxaa lagu soo qaaday arrimaha ugu dambeeya ee Somalia la tacaalaysa muranno doorasho, ammaan xumo, hoggaan xumo iyo abaaro.
Diblomaasiga ugu sarreeya EU ee Somalia joogta ayaa kulanka kaddib Twitter kusoo qortay in ay EU Somalia ka doonayso inay ku taageerto cambaaraynta dagaalka uu Ruushku ku qaaday Ukraine.
Haddaba, maxaa la gudboon Somalia?
Somalia oo cashar aad u fiican kasoo baratay dhex boodidda NATO & WARSAW oo ay ku jabtay 1970meeyadii oo ay u noqonayso qaran-jabka ku dhacay Somalia oo kaddib markii ay siyaasad is maqiiq ah oo aan aad loo bislayn lala dhex boodey ay bari iyo galbeedba si dadban iskugu raaceen in Somalia la dumiyo ayaa haatan u baahan in 2 jeer laga fikiro tillaabo kasta.
Arrintani dabcan mid hal maqaal lagu soo koobi karo ma aha, balse waxaa muhim ah in laga eego laba dhinac oo ugu muhiimsan oo kala ah:
1 – Sida ay Somalia u muujin karto siyaasad bisil oo aan ahayn in la dhex boodo khilaaf kasta oo dunida ka dhaca kaddibna dhinac lala safto, taasoo marka lagu barto inaad reer qiiro tahay ay cid kasta khilaafkeeda kusoo gelinayso, kaasoo aadan hadhoow qiil ku lahayn marka ay heshiinayaan dadkii is hiifay, sida ka dhacday Khaliijka.
2 – Somalia oo u baahan in sideedaba ay qaadato siyaasad ay iyadu ku danaysanayso islamarkaana ay uga fursanayso inay cidna la colloowdo intii suurtagal ah, maadaama aan nahay ummad aan colaad, abaar iyo dagaal u taagnaa muddo 50 sano hadda kusii dhow. Waxaa taa laga qalin daaran karaa Turkiga oo aad u yaqaanna sida loola macaamilo madaxyo is diiddan iyadoo aan lagu milmin.
3 – Somalia iyo guud ahaan Soomaalidu waloow ay Galbeedka cuqdado badan u qabto misna lama inkiri karo inay bariga uga roonaayeen markii ay dadka Soomaaliyeed u kala qaxeen daafaha caalamka, taasoo keentay in dhaqaalaha Somalia uu maanta dakhliga ugu badan ka helo qurabjoogta Soomaalida ee Galbeedka joogta, taasi waxay si dan ahaan noogu xiraysaa Galbeedka, taana waa in maanka lagu hayaa. Sidoo kale ma aha in bariga colaad loo muujiyee waa in aan wada maalnaa.
Somalia haddii ay maskax furan oo xasilan la timaado iskana dhaafto waxa aan u bixiyey ”Ruwaayadda Raadiyaha” sida qab baa lasoo celinayaa iyo wax baa la cayrinayaa oo ah sheekooyin aan horay ugu jabnay waxaan baranaynaa sida looga dhex kalluumaysto dunidan karaahiyada badani taallo oo aynaanba haatan u haynin karti aan cid gaar ah farta ugu fiiqno.
Previous article”Ma idin jiidaa ilaa Moscow?!” – Ruushka oo Ukraine kala kulmay arrin aanu kusii talagelin (2 Arrimood oo ugu daran)
Next article”Geeridu dad gaar ah ayay ku roon tahay!” – Imisa hilin ayaa si cunsuriyadaysan usoo tebiyey dagaalka Ukraine min CBS, MBC, BBC, Telegraph ilaa Aljazeera (Daawo yaabkan)